iPhone amin'ny Flickr: Saripika maherin'ny 15,000 ary miakatra | Martech Zone
iPhone amin'ny Flickr: sary 15,000 mahery ary miakatra
Asabotsy, Jona 30, 2007 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Miaraka amin'ireo fientanentanana rehetra momba ny iPhone (tsy mahazo iray aho) dia nieritreritra aho fa hahaliana ny mahita ilay hetsika ao amin'ny Flickr sy ny isan'ny olona mametraka sary na momba ny iPhone na miaraka amin'ny iPhone. Taitra aho nahita sary maherin'ny 15,000 tamin'ny iPhone nalefa tao amin'ny Flickr!
Ho an'ireo mpamaky RSS, kitiho hatramin'ny alàlan'ny lahatsoratra hijerena ny sary mihetsika:
Ny ekipa Apple Marketing dia tena mendrika bonus amin'ity iray ity!
Fitantanana ny vokatra: Ny fahanginana dia fahombiazana izay matetika tsy mandeha amin'ny laoniny
Amazon Associates Central Sucks dia ratsy toa ny Commission
Jul 1, 2007 amin'ny 9: 28 AM
Tsy tiako ny iPhone. Ary mbola tsy misy izany (ho an'ny toerana misy ahy - mandritra ny 6-9 volana farafahakeliny)…
Jul 1, 2007 amin'ny 10: 43 AM
Heveriko fa mahafinaritra ny Apple amin'ny fanodikodinana ny olona amin'ny varotra. Raha misy orinasa maro mifantoka amin'ny famokarana sy miverina amin'ny fampiasam-bola, Apple dia mifantoka amin'ny 'cool'. Mifantoka amin'ny 'faniriana' sy 'filàna' izy ireo, mifanohitra amin'ny mahazatra.
Izany dia nilaza fa manana tantara lava be i Apple amin'ny fanaovana zavatra 'miasa' amin'ny voalohany ary mitondra fanavaozana amin'ny vokatra. efa naneso tamin'ny milina Apple somary kely.
Raha mitodika ny lasa anefa… Manana AppleTV aho (izay mijery toy ny fahitalavitra mahazatra), MacBookPro, ary G3 (mila fanampiana) ary G4 (mila fanampiana ihany koa). Roa taona lasa izay, tsy nanana Apple aho!
Tsy mikasa ny hahazo ny iPhone tsy ho ela aho. Rendrarendra tsotra izao tsy zakako izao. Ankehitriny… raha te hanova izany ny mpampiasa ahy… 🙂
Jolay 1, 2007 amin'ny 4:10 PM
?ary ny zavatra hafahafa (izay mbola mahagaga ahy taorian'ny taona maro tamin'ny solosaina) dia ny iPhone manana hery fanodinana bebe kokoa noho ny G3. (Raha miresaka momba izany, ahoana no nahazoanao tanana tamin'ny G3 roa taona lasa izay?)
Tiako koa ny milaza fa Apple dia mihoatra noho ny "mangatsiaka". Eny, manao fitaovana mangatsiatsiaka izy ireo, fa ny fototra ho ahy dia "miasa". Tsy mifanaraka amin'ny PC izy ireo, fa kosa mahazo zavatra miasa ivelan'ny boaty ianao. Tsy hahazo paramètre maro azonao ovaina ianao. Mety misy afaka miteny hoe: Microsoft dia mino ny hamela ny mpampiasa hanana safidy maro. Apple dia mino fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mahalala firy momba ny fiainana anaty solosaina, ary noho izany ny injeniera Apple dia manao ny safidy ho anao.
Ho an'ny asa sasany dia tsara kokoa ny Mac, ho an'ny hafa dia PC izany. Soa ihany fa lasa manjavozavo kokoa ny andalana tato ho ato.
Ny KIA sy ny Mercedes dia samy mitondra anao avy any A ka hatrany B. Somary mahazo aina kokoa amin'ny iray hafa…
Jul 2, 2007 amin'ny 8: 15 AM
Ataovy tsara! (Vao haingana aho no nahazo ny G3 sy G4 – tantara lava be izany, saingy samy mila asa be izy roa mba hiverenana amin'ny endriny… ary mila mpanara-maso, kitendry, sns aho. Tsy nanam-potoana hamerenana azy ireo aho. )
Jul 2, 2007 amin'ny 5: 20 AM
Eny, Apple dia manao zavatra "mangatsiaka" fa mifanohitra amin'ny ohatra ho an'ny IBM/Lenovo Thinkpads, izay "miasa" fotsiny ary ny "asa" dia tsy mitovy amin'ny "mangatsiaka" 🙂
Jul 2, 2007 amin'ny 6: 52 AM
?izay miankina amin'ny asanao indray 😉
(Heveriko fa izany indrindra no lalaovin'ny fampielezan-kevitra Apple…)
Jul 2, 2007 amin'ny 8: 20 AM
Efa ela aho no nanana Thinkpad ary mahafinaritra izany. Biriky io, fa nanana Rafitra Fampandehanana 3 aho (Windows 2000, Win 98, ary OS/2). Fahatsiarovana mahafinaritra. Manana MacBookPro aho izao ary io no solosaina finday tsara indrindra nananako hatramin'izay – na dia kivy aza aho hametraka izany tao amin'ny fivarotana nandritra ny andro vitsivitsy. (Namadiny haingana be i Apple – nahavariana ahy).
Jolay 5, 2007 amin'ny 4:43 PM
iza! sary be dia be izany O_O